Inyuvesi Ngokuhlukahluka »Hodges University
IHodges University Ihola Indlela Yokuhlukahluka Emfundweni Ephakeme
Ukwehluka kuyindlela yokuphila eHodges, lapho ifilosofi yokuhlukahluka inamandla. Iyunivesithi yethu iyaqiniswa futhi inikwe amandla yimiphakathi yethu eyahlukahlukene, enamasiko ahlukahlukene yabafundi, ubuhlakani, kanye nabasebenzi abaletha ukuphindaphindeka kwamazwi nemibono emisebenzini yethu esabelana ngayo. Siyakuhlonipha futhi sikwazise ukubaluleka kwabantu abavela kuzo zonke izinhlanga, ubuzwe, ubudala, ubulili, izinkolo, izinkanuko zobulili, ukukhubazeka, isimo sezomnotho noma sokuba ngumakadebona, nezinye izindlela ezahlukahlukene nokwehluka kwabantu, futhi siyakwazisa ukwehluka kwemicabango. Sizibophezele ekubekezelelaneni, ekuzweleni, ekuqondaneni nasekuhloniphaneni yonke indawo emphakathini wethu, futhi siqinisekisa isithembiso sethu sokuhlinzeka indawo yokwamukela bonke.
IHodges University ibizwe njenge-Institute for Diversity Certification njenge-Diversity and Inclusion Leader.
# 3 Amakhampasi Aphephile Ekholeji eFlorida
Ibizwa ngamaKolishi ahlukahlukene kakhulu eNiche eFlorida
Hlola Izinhlelo Zethu
Kungani Ukuhlukahluka Kubalulekile Ekholejini?
Ngamunye wethu uza ekolishi noma eyunivesithi azikhethele yona kanye nesethi yethu yokuhlangenwe nakho okubumba indlela esibona ngayo umhlaba. Njengoba siqala ukuhlangana nabantu abasha ngaphakathi kwabafundi esikanye nabo futhi senza izifundo nabo, siqala ukubona ukuthi okuhlangenwe nakho kwethu yilokho nje - okwethu okuhlangenwe nakho.
Ngemicabango evulekile, sifunda ukuthi okwenzeka kwabanye kuletha kanjani imibono emisha ngokuphelele kumbono wethu nangendlela esibona ngayo umhlaba. Ukuvula izingqondo zethu ukuthi ziqonde ukufakwa, ubuhlanga, ubuhlanga nokwehluka kobulili, isikhundla sobudala, ukwehluka ngokwenkolo, ubudala, kanye nesimo sezomnotho kusenza sibe ngabantu abaphelele. Njengoba uya kwabasebenzi ngalo mbono omusha, uzothuthukisa ukuncintisana kwezomnotho eMelika.
IHodges University igxile ekwakheni amabhuloho emphakathini omkhulu futhi isebenze namaqembu ukuletha ukugxila okubanzi nokuqokonyiswe kakhulu kokuhlangenwe nakho kokwehlukahlukana nokufakwa okuhle ngokubandakanya umphakathi. Ekhuluma kulokhu kugxila, uHodges unikeza ikhalenda lemisebenzi yokwehlukahluka kwabafundi basekolishi namalungu omphakathi ngokufanayo. Finyelela ekuqondeni ukuthi yini eyenza sihluke futhi sihluke, bheka amasiko amaningi esebenza, futhi uzokhula ube ngumuntu owemukela obala umehluko wabanye. Lo mbono omusha uzokuvumela ukuthi uqinise ukuqonda kwakho abanye emsebenzini.
Ukutholile Kanjani Ukuhlukahluka?
IHodges U yamukela ukwehluka ngezindlela eziningi.
Kanjani? Ngokuxazulula izinselelo ezihambisana nokushintsha kwesibalo sabantu, imibono ehlukene, kanye nokungakhethi emsebenzini. UHodges ubhekana nalezi zinselelo ngokugxila ekufakweni, ekusebenzeni ngamasiko nasekulinganeni. Ngale ndlela, iNyuvesi isebenza ukudala isiko elicebile nelivundile ngomzimba wethu wezitshudeni ohlukahlukene. Lokhu kwehlukahluka kusiza abafundi ukuthi bazizwe benamandla futhi kungaletha wonke amandla abo okufunda nokukhula.
Kungani Kufanele Wamukele Ukwehlukahluka?
Uma uhlela ukusebenza endimeni yokuphatha, noma eqenjini, kubalulekile kuwe ukwamukela indawo yokwehlukahlukana ukuze uphumelele. UHodges ufunde ukuthi abaphathi banamuhla kumele babe namakhono ahlukahlukene namasiko wokukhiqiza, futhi lawo makhono afanayo akuvumela futhi ukuba ube yilungu elikhiqizayo leqembu. Uzodingeka futhi ukuthi ube nesibopho sokukhiqiza okuphezulu nokufakwa kubo bonke ezindaweni eziningi zomsebenzi.
Lesi sidingo sokuthi ukwazi ukusebenza emaqenjini amasiko ahlukahlukene kanye naphakathi kwezizukulwane eziningi yiyona ebangela ukuzinikezela kukaHodges ekwakheni imvelo ehlukahlukene. Konke esikwenzayo kugxile ekwakheni indawo abafundi bethu abazophumelela kuyo, futhi ukukhetha kwethu ukuhlinzeka ngesimo sokufunda esihlukile kuwubufakazi bokuzinikela kwethu endleleni yakho yempumelelo.
Umphakathi waseHodges University
Izibalo Zokuhlukahluka kukaHodges
IHodges University yamukela abafundi abavela kuzo zonke izinhlanga, izinhlanga, ubudala, ubulili, izinkolo, ukuthambekela kwezocansi, ukukhubazeka, isimo sezomnotho noma sobudala, nezinye izindlela ezahlukahlukene nokwehluka komuntu ngamunye. Sikhuthaza umfundi ngamunye ukuthi akhulume futhi afundise abanye ngamava abo ahlukahlukene ukudala isimo sokufunda solwazi olunwetshiwe lwabo bonke.
Sizibophezele ekwakheni ikhampasi ehlukahlukene ukuze bonke abafundi bathole impumelelo. Ngezansi kunezibalo zeHodges University.
Ukubhaliswa Kobuhlanga Nobuzwe
I-African American: 12%
Okumhlophe, okungewona amaSpanishi: 38%
Okunye, okuxubile, noma okungaziwa: 6%
Abafundi bebonke abancane kanye nezinga lokwehlukahlukana ngokobuhlanga kweHodges University ngama-62%. Lo mehluko usenza sibe ngenye yezinhlangano zemfundo ephakeme ezahlukahlukene kakhulu eFlorida. Siphinde sabizwa njengesikhungo esiphakeme sokuSiza amaSpanishi. Ukuba yunivesithi ehluke kakhulu eFlorida kuyinselelo esiyemukelayo, ngoba ekufuneni ukunikeza abafundi imfundo ehlukahlukene - sifuna ukusakhela umhlaba ongcono sonke.
Xhumana noHodges U Mayelana Nokwehluka
Siyayamukela imibuzo yakho mayelana nokwehluka nokufakwa kokubili ekhempasini nasemphakathini. Sicela uxhumane nathi ku:
IHhovisi Lezokwehluka, Ukufakwa kanye Nobuchule Bamasiko
4501 Colouial Boulevard, Isakhiwo H
I-Fort Myers, FL 33966